Waamicha miseensota Poolisii Oromiyaa hundaaf |
POOLISIIN EEGDUU UUMMATAATI MALEE KAN PAARTII MITI
Qabsoo Qeerron Oromoo diina dura dhaabbattee gaggeessaa turte keessatti erga Obbo Lammaa Magarsaa gara aangootti dhufee poolisiin Oromiyaa Qeerroo fi ilmaan Oromoo irratti dhukaasuu fi ajjeesuu dhaabudhaan gaachana uummata Oromoo tahuun yeroo Oromoon mirga isaaf bahee falmatu nageenya ilmaan Oromoo eegsisaa turan. Haa tahu malee erga Obbo Lammaan Oromiyaa irraa ka’ee adeemsumaan poolisiin Oromiyaa amala jijjiirrachaa dhuftee jirti. Dhiheenya kana haala nama dinqisiisun poolisiin Oromiyaa kan uummataa tahuu irraa gara poolisii paartii tokkoo/Bilxiginnaa/ akka tahee hanga fakkaatutti deeggartoota fi miseensota ABO fi KFO irratti reebichaa fi hidhaa jumlaa gaggeessaa jiru. Akkasumas badii tokko malee ilmaan Oromoo keessattuu Qeerroo reebicha irraan gahaa jiru. Gama kaanin paartii Bilxiginnaa deeggaruun dhiichisaa, kan isaan mormu hidhaa fi reebaa jiru.
Gochi kuni gocha fokkataa poolisii Oromiyaa irraa gonkumaa hin eeggamneedha. Poolisiin eegduu paartii siyaasaa kamuu osoo hin taane eegduu uummataa fi seera biyyattiiti. Fedhii nama dhuunfaa ykn paartitiif osoo hin taane hojiin poolisii seera kabachiisudha. Poolisiin paartii kamuu irraa bilisa. Mootummaan ni kufa ni dhufa. Poolisiin garuu ittuma fufa. Poolisiin mindaa paartii irraa osoo hin taane galii uummata irraa argamu nyaata.
Poolisoonni Oromoo akkuma gaafa Qeerron rasaasa diinaa dura dhaabbatu gaachana saba keessanii tatan, Gaafa Oromoon daangaa irraa buqqa’u waliin dhaabbatanitti hardhallee Qeerroo fi uummata keessan hiraarsuu, hidhuu, reebuu irraa of qusachuun Gaachana uummata Oromoo taatanii akka itti fuftan Qeerron Oromoo Waamicha Oromummaa isiniif goona.
Kan hardha aangoo daheeffatee Oromoo dararu boru aangon biraa deemti. Uummatuma kanatuu isa biratti hafa. Akkuma wayyaanen kufte mootummaan kamuu ni kufa. Kan uummata isaa darare garuu uummata isaa keessaa jiraan adda baha. Kabajaa hin argatu.
Poolisoonni Oromiyaa Waamicha keenya fudhachuun seeraf malee paartii kamiifuu akka hin dhaabbanne abdii isinirraa qabna.
POOLISIIN SEERAF MALEE PAARTIDHAAF DHAABBACHUU HIN QABU.
MOOTUMMAAN NI KUFA NI DHUFA
UUMMANNI ITTI FUFA.
Previous articleMagaalaa Buraayyuutti aartistoota Oromoo maaltu mudate?
Next articleWaajjiirri ABO Jalduu Magaalaa Goojjoo Akka Cufamu Poolisii Ona (Aanaa) Jalduu Irraa Akeekkachiisi Kenname